Ohatrinona ny vitamina D tokony ho raisiko? Ny dosie vitamina D sy ny tsy fahampiana - Wellness | Desambra 2021
Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao Orinasa Mpanao Gazety Pets News Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Lalao Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fiaraha-Monina Zava-Mahadomelina Vs. Namana Fiaraha-Monina, Fahasalamana Vaovao, Wellness Fialam-Boly Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana
Tena >> Wellness >> Ohatrinona ny vitamina D tokony ho raisiko?
Mety efa naheno ny maha-zava-dehibe ny fahazoana vitamina D ianao, saingy fantatrao ve izany? Ary ahoana no ahafahanao manavaka azy amin'ny masoandro? Ary maninona no tena zava-dehibe. Vakio hatrany.
Ny vitamina D dia vitamina mety levona amin'ny hoditra vokarin'ny hoditra rehefa tratry ny hazavana ultraviolet. Ny sakafo sy ny fanafody famenon-tsakafo sasany koa dia misy vitamina D. Tena ilaina ny otrikaina D mba handraisana kalsioma ary hananganana taolana mahasalama sy matanjaka. Ilaina ihany koa amin'ny fitantanana ny haavon'ny siramamy ao amin'ny rà, ny ady amin'ny aretim-po, ny fifehezana ny hormonina ary ny fanatsarana ny toe-po ary ny fanampiana amin'ny fifantohana sy ny fitadidiana.
Ahoana no ahafantarako raha tsy ampy vitamina D aho?
Ny tsy fahampian'ny vitamina D dia midika fa ny vatana tsy ampy amin'ny vitamina ary mety tsy mandeha tsara noho io. Manodidina ny 40% ny olona any Etazonia no mety manana vitamina ambany D. Ny olona manana hoditra mainty sy vehivavy bevohoka mety ho mora tratran'ny tsy fahampiana.
Ny tsy fahampian'ny vitamina D dia mety miteraka zavatra maro, toy ny:
Tsy ampy ny fiposahan'ny masoandro
Sakafo tsy misy vitamina
Manao sunscreen be loatra
Ny tsy fahampian'ny vitamina D dia mety hampitombo ny mety hampidi-doza anao amin'ny toe-pahasalamana hafa, noho izany dia ilaina ny mahafantatra ny sasany amin'ireo famantarana fampitandremana. Ireto ny sasany amin'ireo soritr'aretina mahazatra indrindra mety ho avy amin'ny fananana vitamina D ambany:
Ny fivontosana sy ny fivontosana
Taolana malemy na tapaka
Raha mieritreritra ny dokoteranao fa tsy ampy vitamina D ianao dia mety manafatra fitsapana ra izy hanamafisana izany. Ny fitsapana ny ra dia mandrefy ny endrika vitamina D mivezivezy ao amin'ny vatana antsoina hoe vitamina D 25-hydroxy D, na 25 (OH) D. Raha ambany ny tahan'ny ranao dia mety hanome sosokevitra fanampiny ny dokoteranao.
Te hanana ny vidiny tsara indrindra amin'ny vitamina D?
Misorata anarana momba ny vidin'ny vitamina D ary tadiavo rehefa miova ny vidiny!
Ny salanisan'ny olona iray tsy manana tsy fahampiana dia tokony mihinana fatra isan'andro farafahakeliny 600 vondrona iraisam-pirenena (IU) vitamina D, hoy ny Fitsaboana Yale . Na izany aza, miankina amin'ny taonany, ny soritr'aretin'ny tsirairay, ny tantaran'ny fitsaboana ary ny valin'ny fihinanana vitamina ny habetsaky ny vitamina D tokony ho raisin'olona.
Ny olona mihoatra ny 70 taona sy ny vehivavy menopausal dia mety mitaky mihoatra ny 600 IU. Rehefa mihantitra ny olona, ​​dia tsy mamokatra vitamina D ny hodiny, izay midika fa mila fanampiana fanampiny izy ireo.
Ny vehivavy bevohoka sy ny olona manana toe-pahasalamana sasany izay manelingelina ny fidiran'ny vitamina D - toy ny aretin'atody na fibrosis cystic - dia mila fihinanana isan'andro avo mihoatra ny 600 IU. Afaka mihinana vitamina D ianao amin'ny andro rehetra amin'ny andro. Na izany aza, mety mahasoa kokoa ny mandray azy amin'ny tavy fihinana sasany izay avy amin'ny sakafo toy ny voanjo na masomboly satria mety levona.
maro dokotera ary ireo matihanina amin'ny fahasalamana dia manoro hevitra ny fihinanana fatra vitaminina D kely kokoa rehefa mandeha ny fotoana mba hiverenan'ireo ambaratonga. Ho an'ny olon-dehibe, io dia mety hidika ho fihinanana vitamina D avoavo 1,500-2000 ambony. Ny fatra ambony kokoa manakaiky ny 10.000 IU dia mety ilaina amin'ny olona sasany izay manana osteoporosis na toe-javatra mitovy amin'izany. Na izany aza, ny fatra vitaminina D (izany hoe, 40.000 IU) dia mety miteraka fanapoizinana vitamina D sy olana ara-pahasalamana bebe kokoa. Zava-dehibe ny miresaka amin'ny dokotera momba ny doka mety aminao.
Moa ve mihinana vitamina D be loatra aho?
Na dia manana tombony ara-pahasalamana maro aza ny fihinanana vitamina D dia azo atao ny misotro be loatra. Ny fanapoizinana vitamina D, na hypervitaminosis D, dia mety hiteraka calcium ao anaty rà (hypercalcemia) ary hiteraka fanaintainana amin'ny taolana, maloiloy, mandoa, na olana amin'ny voa.
Ity misy lisitr'ireo fiatraikany mahazatra mety hitranga amin'ny olona iray amin'ny fihinanana vitamina D be loatra:
Fivalanana be loatra
Ny fanafody sasany dia mety mifandray amin'ny vitamina D. steroids Mety hanelingelina ny fiasan'ny vatana ny vitamina. Ny cholestyramine mampihena ny kolesterola sy ny orlistat mampihena ny lanja dia mety hanakana ny fahafahan'ny vatana handray otrikaina D. Ny fanafody sasany dia mety hampitombo ny haavon'ny vitamina D.
Inona no karazana fanampiana vitaminina D tokony ho raisina?
Misy karazany roa ny vitamina D. Ny otrikaina D2 (ergocalciferol) dia avy amin'ny sakafo miorina amin'ny zavamaniry toy ny holatra nambolena UV, na ireo sakafo voatanisa ary ireo famenon-tsakafo. Ny vitamina D3 (cholecalciferol) dia avy amin'ny biby sy supplement. Hahazo D3 amin'ny menaka trondro, dibera, atiny ary atody atody ianao.
Ny vitamina D dia misy amin'ny endrika fanampiny ho toy ny ranoka, takelaka, na kapsule. Ny dokotera sasany aza dia hanome tsindrona vitamina D. Matetika ny D2 dia mitaky fanoratana ho azo, ary D3 dia mazàna no azo vidiana amin'ny fividianana over-the-counter. Misy adihevitra momba ny hoe matanjaka ve ny D2 noho ny D3; ny fikasana torohevitra ara-pitsaboana no fomba tsara indrindra hahazoana antoka fa mahazo endrika sy fatra mety ilainao ianao.
Ny endrika vitaminina D tsara indrindra raisina ho famenony dia D3; na dia izany aza, D2 dia azo ekena, hoy i Tod Cooperman, MD, mpanorina ny ConsumerLab . Ny D3 dia tsy dia miteraka fahadisoana amin'ny fitsapana amin'ny ra, ary ny fatra avo lenta dia mety hampiakatra avo kokoa ny haavony. Mikasika ny famolavolana, ny ranoka sy ny pilina amin'ny ankapobeny dia samy tsara avokoa (na dia izany aza, nahita vokatra sasany izahay izay tsy manome ny vola voatanisa amin'ny marika). Ny safidiko dia ny rano mitete, satria afaka manitsy ny doka mora foana ianao. Fanampin'izay, azonao atao tsara ny mametraka azy io amin'ny sakafo na amin'ny zava-pisotro, izay tokony hampahatsiahy anao fa ny vitamina D, izay mety levona amin'ny tavy, dia tokony hohanina miaraka amin'ny sakafo misy tavy hanatsarana ny fifohana.
Fomba hafa ahazoana vitamina D ampy
Misy fomba hafa ahazoana vitamina D mihoatra ny fakana suplementement fotsiny. Sunshine dia loharanon'ny vitamina D tena tsara, ary toy izany koa ny sakafo maro.
Ny fandaniana 10 ka hatramin'ny 20 minitra amin'ny masoandro dia manome 1.000-10.000 IU vitamina D. Ny habetsaky ny fotoana tokony holanianao amin'ny masoandro sy ny isan'ny IU ho azonao dia tsy hitovy amin'ny vanim-potoana sy ny toerana onenanao eto an-tany ary ny maizina ny hoditrao. Na aiza na aiza misy anao, ny fotoana fohy amin'ny masoandro andanianao isan'andro dia tokony havoaka mba hahafahan'ny vatanao mandray tsara ny jiro.
Andramo ampidirina ao anaty sakafonao koa ny sakafo be vitamina D. Ireto misy safidy vitsivitsy:
Ny trondro matavy (toy ny salmon, halibut, sardine, tuna ary trondro fotsy) dia be vitamina D.
Ny holatra sasany, toy ny portobello sy maitake, dia manana vitamina D mety tsara, indrindra raha mitombo amin'ny hazavana UV izy ireo.
Etazonia dia manamafy ny ronono miaraka amin'ny vitamina D. Na izany aza, ny ronono manta dia fantatra fa manana vitaminina D voajanahary ihany koa. Mety misy fatran'ny otrikaina avo kokoa aza.
Rahoviana no hahita dokotera
Ny fananana tsy fahampian'ny vitamina D dia mety vokatry ny antony ara-pahasalamana lehibe. Ny vitamina D dia manampy ny vatana handray kalsioma, maneziôma ary posôsôra, izay tena ilaina amin'ny fitazonana taolana mahasalama. Ny tsy fahampiana dia mety hitarika amin'ny tsy fahampian'ny fitrohana calcium izay mety hiteraka osteoporose, osteopenia, na rickets amin'ny ankizy.
Rickets dia mety ho matotra amin'ny fahasalaman'ny taolana ny zaza satria miteraka taolana malefaka sy tsy fahombiazan'ny taolana. Ny Osteomalacia dia toe-javatra mitovy amin'izany fa ho an'ny olon-dehibe, izay indraindray mitarika any amin'ny fianjerana sy taolana tapaka izay sarotra sitranina. Miaraka amin'ny osteoporose dia mihalefaka ny taolana ary noho izany dia azo inoana kokoa ny manaparitaka na miteraka olana amin'ny fihetsika.
Indraindray, ny tsy fahampian'ny vitamina D dia tsy vokatry ny tsy fahazoan'ny tara-pahazavana ampy fotsiny. Misy fepetra ara-pahasalamana misy fiantraikany amin'ny fomba anaovan'ny vatana ny otrikaina na ny fanodinana ny vitamina. Ny aretin'ny voa sy ny aty dia afaka mampihena ny habetsaky ny anzima ilain'ny vatana hampiasana vitamina D. Aretina Celiac, aretin'i Crohn, ary fibrosis cystic dia mahatonga ny tsinay tsy handray otrikaina D. mitahiry vitamina D, mitazona azy tsy ho ampiasaina mora foana.
Ny fanaintainan'ny taolana sy ny fahalemen'ny hozatra dia mety ho famantarana fa tonga ny fotoana hitsidihana dokotera. Ny tsy fahampian'ny vitamina D dia mety hiteraka soritr'aretina hafa toy ny ketraka , havizanana, sohika, ary koa fihenan'ny erectile . Ny fikatsahana torohevitra ara-pitsaboana matihanina amin'ny alàlan'ny fanatonana dokotera no fomba tsara indrindra hamaritana raha mila fanampiana ianao na tsia. Raha toro-hevitra amin'ny mpitsabo iray ianao mba mihinana vitamina D, azo atao ny manangona vola amin'ny doka D2 na D3 miaraka amin'ny karatra fitehirizana Rx amin'ny alàlan'ny SingleCare.
Delsym vs. Robitussin: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Cialis vs. Viagra: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
inona no atao amin'ny fisotroana vinaingitra paoma ho an'ny fahasalamanao?
dia aleve ok raisina raha bevohoka
manao ahoana ny pilina prozac?
tsara kokoa noho ny fanafody fanefitra amin'ny fanaintainan'ny vatana
inona no dikan'ny hoe avo lenta ny tsh anao?